विदेश गएर कमाउने आसमा आफ्नैबाट धोका पाए, अनि….. – Online Khabar 24
विदेश जाने, कमाउने र रमाउने सपना देख्दा निकै ह’न्डर खाएँ । आफ्नालाई विश्वास गर्दा धो’का पाएँ ।
तर अरूको कुरामा भन्दा पनि हातको सीपमा विश्वास गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ आजकाल । उमेरले ३१ वर्षको भएँ ।
साथी भाइकै कुरामा विश्वास गरेर २/४ लाख रुपैयाँ फस्यो पनि । जब साथीभाइलाई गरेको विश्वासमाथि घात भयो तब मेरो आँखा खुले । कमाउँछु भनेर मात्र नहुने रहेछ । कमाउनका लागि कि त हातमा सीप कि त पढाइ हुन पर्ने रहेछ ।
म जहिले पनि घमन्ड गर्थेँ । सीप किन सिक्न पर्‍यो र जस्तो लाग्थ्यो । तर आज हातको सीप विदेशको कमाइभन्दा ठुलो रहेछ जस्तो लाग्न थालेको छ । विनोद तामाङ , खोटाङ । उज्यालो अनलाइनबाट साभार गरियको खबर ।
Prev४० लाख जनसङ्ख्या भएकाे सहरमा फेरि लकडाउन ! कारण निकै डरलाग्दो ।
nextश्रीमती र छोरीको ह’त्यामा सं’लग्न तामाङ प’क्रा’उ ! घाँटी तथा शरीरको विभिन्न भागमा टो’केको दाग, यसरी बाँचे बुवा